प्रचन्डले बुहारी विना मगरलाई पुनः मन्त्री बनाउन खोजेपछि माओवादीमा बवन्डर, कांग्रेसमा झनै लफडा ! अकांक्षीहरु को को ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
प्रचन्डले बुहारी विना मगरलाई पुनः मन्त्री बनाउन खोजेपछि माओवादीमा बवन्डर, कांग्रेसमा झनै लफडा ! अकांक्षीहरु को को ?
सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस, माओवादीदेखि जसपासम्ममा मन्त्रीका लागि आकांक्षीको ताँती
२०७८ श्रावण १३, बुधबार १३:५१:००
काठामाडाैं। केही दिन अघि मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू तनावमा भएको बताएका थिए । उनलाई तनाव हुने कारण अरु होइन मन्त्रीका लागि पार्टीमा आकांक्षीको ताँती हो । उनले खुलेरै मन्त्री बन्न आकांक्षीको ताँतीले आफूलाई तनाव भएको बताएका थिए ।
अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार फेरिंदा गठबन्धनमा धेरैवटा मन्त्रालय पाउने अवस्था छैन । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस, माओवादीदेखि जसपासम्ममा मन्त्रीका लागि आकांक्षीको ताँती नै लागेको छ । आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नै ढिलाइ भइरहेको छ । प्रचण्डले घोषणा गरेरै बढीमा सातवटासम्म मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउने बताएका थिए ।
सात जनामा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल उर्जा मन्त्री भएकी छिन् । यस्तोमा अब माओवादीले बढीमा पाँच मन्त्रालय पाउँछ । नभए तीन वा चारमा पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, मुख्य दाबेदार पनि धेरै छन् ।
उपप्रधानमन्त्रीसहित प्रभावशाली मन्त्रालय पाए सरकारमा जान नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तीव्र चाहना देखाएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रका लागि उनले लबिङ गरेका छन् । श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने अवस्था नआए सदाबहार मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । यो समूहबाट शशि श्रेष्ठ र अन्जना विशंखेको नाम पनि चर्चामा छ ।
त्यस्तै, बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालतबाट पनि सफाई पाएका कृष्णबहादुर महरा पनि उपप्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार हुन् । उनले फेरि पनि संचार मन्त्रालयमै आँखा लगाएको बुझिएको छ ।
माओवादीबाट देवेन्द्र पौडेल, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेलको नाम चर्चामा छ । प्रभावशाली नेता भए पनि वर्षमान पुन यसपटक मन्त्रीका लागि चर्चामा छैनन् । पौडेल, गजुरेललाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष प्रचण्ड यसपटक तयार देखिएका छन् ।
त्यस्तै मातृका यादव, जयपुरी घर्ती, शिवकुमार मण्डल, अमनलाल मोदी, सुदन किराती, महेश्वर गहतराजको नाम पनि मन्त्री बन्ने चर्चामा छ । महिलाबाट मन्त्री हुँदा जयपुरीको सम्भावना बढी रहेको बताइन्छ । केही दिनभित्रै कांग्रेस, माओवादी र जसपाबाट मन्त्री थप्ने तयारी छ ।
विनाको लागि फेरि लबिङ
यस अघि खानेपानी मन्त्री बन्दा आलोचित बनेकी विना मगरको नाम यसपटक पनि फेरि मन्त्रीका लागि चर्चामा छ । सुदुरपश्चिमका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्ट एमालेतिर लागेपछि भूगोलमा राजनीतिक पकड बचाउन पनि विनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने गरी केहीले लबिङ गरेका छन् । प्रचण्डकी बुहारीसमेत रहेकी विनालाई मन्त्री बनाउँदा यस अघि पनि आलोचना भएको थियो । महिला बालबालिका मन्त्रीमा उनको नाम चर्चामा ल्याइएको छ ।
कांग्रेसमा मन्त्री बन्न झनै लफडा
कांग्रेसमा मन्त्रीका लागि दाबेदार नै धेरै भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ । तर, छिट्टै मन्त्री चयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादु देउवालाई निरन्तर दबाब परेको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्री चुनिएका देउवाले ३ साउनमा विश्वासको मत लिएका थिए । तर, विश्वासको मत लिएको पनि १० दिन बित्न लाग्दा पनि अझै सरकारमा मन्त्री थपिन सकेका छैनन् ।
मन्त्रीका लागि कांग्रेसमा मात्रै होइन माओवादीमा पनि उत्तिकै दाबेदारको ताँती लागेको छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षमा पनि मन्त्रीका बन्नका लागि धेरै सांसदहरु लबिङमा लागिरहेका छन् । देउवा मन्त्री चयन छिटो गर्नुपर्ने गरी पछिल्लो केही दिनयता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवादमा छन् ।
जसपाको आधिकारिकता मिलेपछि उसले पनि अब मन्त्रीमा पठाउनेको नाम टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । अब शुक्रबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी छलफल अघि बढेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
कांग्रेसमा संस्थापनबाट सचेतक पुष्पा भुसाल, डा. नारायण खड्का, मीन विश्वकर्मा, डा. डिला संग्रौलासहितका नेताहरुले यसपटक मन्त्रीका लागि निक्कै दाबेदारी गरेका छन् । यी चारमध्ये दुई जनालाई मन्त्री बनाउन देउवा तयार रहेको बुझिएको छ ।
प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भइसकेका छन् । यस्तोमा अर्को नेतालाई प्रमुख सचेतक बनाउने अवसर देउवालाई छ । प्रमुख सचेतकमा मीन विश्वकर्मालाई ल्याउने तयारी देउवाले गरेको बुझिएको छ । यसपटक पूर्व संस्थापनबाट सिनियर नेताहरु प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइरालाले नै दाबी गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री र अर्को कुनै प्रभावशाली मन्त्रालय पाए सरकारमा जान यी नेताले दबाब बढाएको बुझिएको छ ।
पूर्व संस्थापनबाट महामन्त्री डा. शशांक कोइराला स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने चर्चा चलाइएको छ । तर, शशांक निकट स्रोत संस्थापनबाट महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने रणनीति स्वरुप यस्तो चर्चा गरिएको बताउँदै आएको छ ।
पूर्व संस्थापनबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, संजय गौतम, राजन केसी, तेजुलाल चौधरी, प्रमोद यादव, प्रकाश रसाइली स्नेहीको नाम चर्चामा छ । लालकाजी गुरुङ मोहन आचार्यलेसमेत मन्त्रीका लागि ताकेता गरेका छन् । पूर्व संस्थापनले बढीमा तीन मन्त्री मात्रै पाउने अवस्था छ । तर पूर्व संस्थापनले चारवटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ ।
यता सिटौला पक्षबाट गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधान मध्ये एकलाई मन्त्री बनाउनैपर्ने दबाब देउवालाई छ । युवा नेता थापालाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन दबाब भए उमाकान्त पनि अर्का दाबेदार हुन् । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले गगनलाई भन्दै चौधरीलाई प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । तर, गठबन्धन सरकार भएकोले देउवालाई सन्तुलन मिलाएर मन्त्री चयन गर्न यसपटक निक्कै सकस पर्ने देखिएको छ । नजिकिंदो महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै देउवाले यसपटक मन्त्री चयनलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
देउवाले गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई मन्त्री चयन गरिसकेका छन् । दुई दिन अघि देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई ल्याएका थिए । यी तीनै जना देउवा निकटका हुन् । अर्को पक्षका भए पनि मन्त्री दिएर महाधिवेशनमा आफूतिर तान्ने दाउमा देउवा छन् ।